को-रोना विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिमा पनि देखियाे को-रोनाको नयाँ भेरियन्ट, यस्ताे रहेछ लक्षण ! - Like For Nepal
को-रोना विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिमा पनि देखियाे को-रोनाको नयाँ भेरियन्ट, यस्ताे रहेछ लक्षण ! दक्षिण कोरियामा पनि को- भिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमि-क्रोन’ फेला परेको छ ।
कोरिया रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम एजेन्सी (केडिसीए)का अनुसार हालै नाइजेरियाबाट दक्षिण कोरिया आएका एक दम्पतीमा उक्त नयाँ भेरियन्ट ओ-मिक्रोन देखिएको हो । को- रोना विरुद्धको खोपको दुवै मात्रा लगाएका ती दम्पती नोभेम्बर १४ देखि २३ तारिखसम्म नाइजेरिया भ्रमणमा थिए । उनीहरू कोरिया प्रवेशपश्चात गरिएको परीक्षणमा ओमिक्रोन देखिएको हो ।
खोपको दुवै मात्रा पूरा गरेकाहरूका लागि समेत उत्तिकै ख- त- रा हुने सङ्केत डब्लुएचओले दिएसँगै नयाँ भेरियन्ट ओ-मिक्रोनका बारेमा दक्षिण कोरिया सरकारले चिन्ता र चासोको विषय भएको जनाएको छ । कोरियाले शनिबारदेखि लागू हुने गरी दक्षिण अफ्रिकासहित बोत्स्वाना, जिम्बाबे, नामिबिया, लसोथो, मोजाम्विक, मालावीलगायतबाट हवाई उडानसहित आवागमनमा अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
यसका साथै नयाँ भेरियन्ट देशमा फैलिनबाट रोक्नका लागि विभिन्न नियमको घोषणा गरिएको छ । केडिसीएले ओ-मिक्रोन भेरियन्ट देशका अन्य भागमा फैलिएकोबारे पत्ता लगाउन परीक्षण तिव्र पारेको छ । ओमिक्रोन कोरियामा देखिएपछि यहाँ रहेका नेपालीमा पनि त्रा* स फैलिएको छ । ओमिक्रोनका कारण नेपाली कामदार कोरिया ल्याउने क्रा फेरि रोकिन सक्ने ख* तरा बढेको छ ।
Prevयी देशमा प्रवेश निषेध गर्ने तयारी, जाने तयारीमा हुनु हुन्छ भने ? पढ्नुहोस्
Nextउडिरहेको विमानको ट्वाइलेटभित्र आ त्म ह त्या, आकाशमै ढोका फुटाएर बाहिर निकालियो